Khubarada deegaanka ayaa sheegaya in soo jeedinta cimilada ee AMLO ay dib ugu celinayso | Wardeeq 24 TV
Home Arrimaha Bulshada Khubarada deegaanka ayaa sheegaya in soo jeedinta cimilada ee AMLO ay dib...
Khubarada deegaanka ayaa sheegaya in soo jeedinta cimilada ee AMLO ay dib ugu celinayso
Soo-jeedimaha uu Madaxweyne López Obrador ku soo bandhigay Khamiistii Shirweynihii Hoggaamiyeyaasha toddobaadkan ee Cimilada ma ahan kuwo halis ah, oo ku saleysan fikrad ka badan xaqiiqda, iyo hark dib u soo noqday tobanaan sano oo la soo dhaafay, sida ay sheegeen saddex aqoonyahanno deegaanka ah.
Intaas waxaa sii dheer, sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa Arbacadii diiday fikradda ah in dib-u-habeynta socdaalka ay ku xirnaan karto qorshe dhiraynta Bartamaha Ameerika.
López Obrador oo ka hadlaya shir madaxeedka labada maalmood ah ee uu martigaliyay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, López Obrador ayaa khamiistii sheegay in Mexico joojin doonto dhoofinta saliida cayriin oo ay adeegsan doonto keydkeeda si ay u daboosho baahida gudaha ee shidaalka. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu tilmaamay in dhirta korontada la casriyeeyo si loo yareeyo isticmaalka saliidda shidaalka ama dhuxusha ee wax soo saarka korantada.
Laakiin farriinta dhexe ee hadalka madaxweynaha ee shirwaynaha waxay ahayd casuumaad madaxweyne Biden si ay u taageerto ballaarinta barnaamijka Sembrando Vida ee Mexico (Sowing Life) ee koonfur-bari Mexico iyo Bartamaha Ameerika iyadoo la beero 3 bilyan oo geed lana abuuro 1.2 milyan shaqo.
“Waxaan dabooli doonnaa mas’uuliyaddeenna maaliyadeed waxaanan ballanqaadeynnaa inaan ka caawinno hay’adda wax soo saarka iyo bulshada, idinkuna, Madaxweyne Biden, waxaad maalgelin kartaan barnaamijka Sowing Life ee Guatemala, Honduras iyo El Salvador.”
López Obrador wuxuu soo bandhigay “soo jeedin dhameystiran” taas oo kaqeybgalayaashu ay ka dalban karaan fiiso shaqo ku meel gaar ah Mareykanka markii ay seddex sano ku qaateen geedo beero. Saddex ama afar sano oo kale ka dib waxay heli karaan deganaansho Mareykanka ama laba dhalasho, ayuu soo jeediyay.
Tahriibka, sida aan wada ognahay, laguma xallin karo tallaabooyin qasab ah, laakiin waxaa lagu xallinayaa caddaalad iyo wanaag. Intaas waxaa sii dheer, adigu, madaxweyne Biden, waxaad tahay nin xasaasi ah waxaadna ogtahay in hamiga muhaajiriinta ee ah inuu shaqeeyo oo horay u socdo ay fure u tahay horumarka ummadaha Umadaha waaweyn waxaa lagu sameeyay soogalootiga, kuwaas oo leh dadkan gaarka ah. Waa arrin la abaabulayo qulqulka muhaajiriinta isla markaana loo marsiinayo si bini-aadamnimo leh iyo go’aan wax ku ool ah, ”ayuu yiri López Obrador.
Madaxweynaha ayaa Axadii ku dhawaaqay ujeedkiisa inuu soo jeediyo qorshaha abuurista geedaha socdaalka isla markaana ka codsado Biden Mareykanka inuu si sharci ah iyo dhaqaale ahaanba u taageero balaarinta barnaamijka shaqaalaynta dhirta ee Mexico.
Aqoonyahannada deegaanka ee Mexico, dhinacyada isbeddelka cimilada ee soo-jeedinta madaxweynaha waa kuwo duug ah oo duugoobay.
Previous articleAqoonyahan Hindi Mareykan ah ayaa ka codsaday Mareykanka in loo diro AstraZeneca Jabs Hindiya
Next articleImaaraadka Carabta oo baabuur dagaal kasoo dejiyey garoonka Boosaaso